Fankasitrahana sy fanolorana mari-boninahitra: teto Nosy be Hell ville |
Fankasitrahana sy fanolorana mari-boninahitra: teto Nosy be Hell ville
Tonga teto Nosy be Hell ville Ramatoa Minisitry ny Mponina, ny Fiahiana ara-tSosialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy Naharimamy Lucien Irmah ny Sabotsy 31 aogositra 2019 nisolo tena ny fitondram-panjakana malagasy naneho fankasitrahana sy nanolotra mari-boninahitra Chevalier de l’Ordre National ho an’dRamatoa Maria Luisa Monti noho ny asa soa lehibe vitany teto Madagasikara.
Raha tsiahivina fohy dia teratany Italiana tonga teto Madagasikara tamin’ny taona 1978 i Maria Luisa Monti. Asa sosialy maro no nataony ary ny tena nampiavaka azy dia ny nananganany ny Association Giovanna per il Madagascar ny taona 2009. Nandray an-tanana ireo zaza voan’ny diabeta ny fikambanana tamin’izany. Nanomboka teo dia tsy nitsahatra ny fanampiany ka niroso tamin’ny fananganana sampana fitsirihana ny diabeta teto Nosy be Hell ville. Nifandray tamin’ny Fikambanana Amadia raha teo izy. Nitohy tamin’ny fanatsarana ny ivotoerana teto Stella Maris. Vehivavy mahery fo sy manana vina i Ramatoa Maria Luisa Monti ka tsy nisalasala izy nanangana ity ivotoerana fandraisana ireo zaza tsy misy mpiahy sy sahirana nantsoiny hoe Casa famiglia ity. Mahazaka zaza 32 eo ity toerana ity. Foto-drafitrasa mitentina 150.000 euro. Tontosa ny sabotsy 31 aogositra 2019 ihany koa ny fanolorana io ivotoerana vaovao io.
Nanotrona izao lanonam-panjakana izao ny manam-pahefana avy eto an-toerana notarihin’ny Lehiben’ny faritra Diana, ny Prefet Nosy Be, ny ben’ny tanàna, ny loholon’i Madagasikara avy eto Nosy be, ny lehiben’ny Polisy sy ny solotenan’ny lehiben’ny fari-piadidian’ny zandarimaria eto an-toerana. Teo ihany koa ny fianakaviam-ben’ny fiangonana katolika teto Nosy be ary indrindra ny masoivon’ny Italie eto Madagasikara.
Haitrano tao Anosibe andrefana I: Boriborintany faha IV	Fanomezana ho an’ny ankizy sy tovovavy marefo miisa 105 tao amin’ny Akany Fifampandrosoana Isotry
Fijerena ifotony « village communautaire »
Hetsika tetik’asa « ANTSIKA : kaominina ambanivohitra Fiaferana
Fanolorana vary, satroko, vatomamy ary bisky
Fanolorana kojakoja: Fenerive Est
Fanavaozana ny biraom-paritry ny Minisiteran’ny Mponina: Soanierana Ivongo